သံရုံးအငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရုရှားသံတမန်များအား နှင်ထုတ်ရန် သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်အား အမေရိကန် လွှတ်တော်အမတ်များ တောင်းဆို - Xinhua News Agency
သံရုံးအငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရုရှားသံတမန်များအား နှင်ထုတ်ရန် သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်အား အမေရိကန် လွှတ်တော်အမတ်များ တောင်းဆို
ဝါရှင်တန် ၊ အောက်တိုဘာ ၆ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ရုရှားနိုင်ငံက အမေရိကန်သံတမန်အတွက် ဗီဇာများတိုး၍ ထုတ်မပေးပါက ရုရှားသံတမန်များအား နှင်ထုတ်ရန် အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်အား ဒီမိုကရက်တစ် နှင့် ရီပတ်ဘလီကန် လွှတ်တော်အမတ်များက တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဆီးနိုတ်လွှတ်တော် စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေး နှင့် နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး ကော်မတီများ၏ ခေါင်းဆောင်များ အပါအဝင် ဒီမိုကရက်တစ် နှင့် ရီပတ်ဘလီကန် လွှတ်တော်အမတ် ၁၇ ဦးက အောက်တိုဘာ ၄ ရက်တွင် အမေရိကန်သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်ထံသို့ ပေးပို့ခဲ့သည့်စာတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ ရုရှားသံတမန် ၄၀၀ ကျော် ရှိသော်လည်း ရုရှားနိုင်ငံ၌ အမေရိကန်သံတမန် ၁၀၀ ခန့်သာ ရှိကြောင်း ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
ပေးစာထဲတွင် သံတမန်ရေးရာကိုယ်စားပြုမှု၌ ယင်းအချိုးအစားမညီမျှမှုသည် လက်ခံနိုင်စရာမရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ “ ဒါကြောင့်မို့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ရုရှား သံတမန်အရေအတွက်နဲ့ ရုရှားနိုင်ငံမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ အမေရိကန်သံတမန်အရေအတွက်အကြား တန်းတူရည်တူ ဖြစ်စေဖို့ ရုရှားနိုင်ငံဘက်က ဗီဇာအလုံအလောက် ထုတ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဖော်ပြထားသည်။
“တကယ်လို့ ဒီလိုမျိုး မလုပ်ဘူးဆိုရင် အမေရိကန်သံတမန်ထားရှိမှု တန်းတူညီမျှ ဖြစ်စေဖို့အတွက် ရုရှားသံတမန်တွေကို စတင် နှင်ထုတ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။”ဟု စာတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။
ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့ရှိ အမေရိကန်သံရုံး၌ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော ဌာနအသီးသီးရှိ ဌာနေခန့် ဝန်ထမ်းများကို အမေရိကန် သံတမန်များအဖြစ် ရုရှားဘက်က မှတ်ယူ ရေတွက်ထားကြောင်း ယင်းပေးစာအရ သိရသည်။
ရုရှားဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့သည့်အတွက် ရုရှားနိုင်ငံရှိ အမေရိကန်သံရုံးဌာနအသီးသီး၌ လုပ်ကိုင်နေသော ဌာနေဝန်ထမ်း ၁၈၂ ဦး နှင့် စာချုပ်ဖြင့်ငှားရန်းလုပ်ကိုင်သော ဝန်ထမ်း ဒါဇင်ပေါင်းများစွာကို ပြီးခဲ့သော ဇူလိုင်လနှောင်းပိုင်းတွင် အလုပ်မှ ထုတ်ပစ်ပေးခဲ့ရကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။
ရုရှားသံတမန်များအား နှင်ထုတ်ခြင်း နှင့် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းများကို အမေရိကန်က လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အပေါ် လက်တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် မော်စကိုမြို့ရှိ အမေရိကန်သံရုံးတွင် စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ရာထူးနေရာများအတွက် ရုရှားနိုင်ငံသားများ သို့မဟုတ် တတိယနိုင်ငံသားများ ငှားရန်း ခန့်ထားခြင်း ကိစ္စရပ်ကို လုံးဝ ပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့ကြောင်း ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ကြေညာခဲ့သည်။ (Xinhua)
#U.S #Russian #diplomats #အမေရိကန်နိုင်ငံ #ရုရှားနိုင်ငံ #သံတမန်များ #ဆင်ဟွာ #xinhua #myanmar #xinhuamyanmar
U.S. senators call on Biden to expel Russian diplomats over embassy dispute
WASHINGTON, Oct.5(Xinhua) — Democratic and Republican senators called on President Joe Biden to expel Russian diplomats if Moscow does not issue more visas to U.S. diplomats.
Seventeen bipartisan senators, including leaders of the Senate Intelligence and Foreign Relations committees, wrote inaletter to Biden on Monday that there are over 400 Russian diplomats in the United States but only about 100 U.S. diplomats in Russia.
“This disproportionality in diplomatic representation is unacceptable,” said the letter. “Accordingly, Russia must issue enough visas to approach parity between the number of American diplomats serving in Russia and the number of Russian diplomats serving in the United States.”
“If such action is not taken, we urge you to begin expelling Russian diplomats, to bring the U.S. diplomatic presence to parity,” it added.
According to the letter, Russia counted local staff at U.S. Embassy in Moscow as “American diplomats,”acharacterization that the United States accepted across multiple administrations.
The U.S. State Department said in late July that it had laid off 182 local employees and dozens of contractors at U.S. diplomatic facilities in Russia as requested by Moscow.
The Russian Foreign Ministry earlier this year announcedacomplete ban on U.S. diplomatic missions from hiring citizens of Russia or third countries to administrative and technical posts in response to U.S. sanctions and expulsion of Russian diplomats. Enditem
Photo – Photo taken on Aug. 10, 2021 shows the U.S. Capitol building in Washington, D.C., the United States. The U.S. Senate on Tuesday approvedalong-awaited infrastructure bill, after months of strenuous negotiations between Democrats and Republicans. (Xinhua/Liu Jie)